Bitumen Tangi, Bitumen Emulsion Chirimwa, Diathermic Mafuta Boiler - Jianeng
Iyo yekudiridza nzira yeiyo tembiricha yeasphalt tangi inogadzirwa nekambani yedu inogona kukamurwa kuita: inopisa mafuta kupisa, magetsi kupisa uye kutonhora zvakananga ne burner. Iyo vhoriyamu inogona kuve yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nemutengi, uye inogona kupinda mune yekufambisa yemidziyo. Mhando dzakasiyana dzekudziya coil uye yekusanganisa sosi inogona kugadzirwa bitumen tangi ine zvakasiyana zvinangwa, kuitira kuti isangane nezvinodiwa zvemamiriro chaiwo ekushanda. Kana matangi mazhinji emabhitimu akashandiswa panguva imwe chete, pombi iri pamberi petangi inogona kuiswa kuti igokwanisa kuisirwa saiti yebasa. Uye pombi dzese dzinoiswa isati yaiswa mufekitori. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, hapana shanduko inodikanwa pabasa, kuitira kuti tigokwanisa saiti kuchengetedza kutendeka kwemapaipi. Kana iyo turu bhituru ichida flue gasi kuendesa, inogona kuve yakagadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Dzidza zvakawanda Bata nesu
Iyo yekudiridza mode yeakagadzika asphalt tangi inogadzirwa nekambani yedu inogona kukamurwa kuita: kupisa conduction mafuta kudziya uye kupisa kwemagetsi. Iyo vhoriyamu inogona kuve yakagadzirirwa kubva 20 m 20 kusvika 2000 m3 maererano nezvinodiwa nemutengi. Mhando dzakasiyana dzemagetsi ekudziya uye michina yekusanganisa inogona kuve yakagadzirirwa matangi emarara ane zvinangwa zvakasiyana kuti asangane nezvinodiwa zvekushandisa chaiko mamiriro ekushanda. Iyo tembiricha asphalt tangi inogona kuiswa negetsi yemagetsi pamwero wekutarisa maererano nezvinodiwa nemutengi kuti azive otomatiki yekudzora kwepamusoro uye yakaderera danho remvura Kana iyo turu bhituru ichida flue gasi kuendesa, inogona kuve yakagadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Iyo mudziyo wemhando yebhitumini tangi yakagadzirwa nekambani yedu yakakodzera pakuchengetedza bitumen uye kutakura. Iyo inogona kutakurwa zvakananga negungwa zvichienderana nemhando yekufambisa yemidziyo, iine huwandu hwakawanda hwemamita mazana mashanu nemaviri, uye inogona kugadzirwa uye kuiswa pamwe neagitators. Iyo mudziyo wemhando yebhitumini tangi inonyanya nyore kufamba uye kutakura asphalt. Iyo mudziyo wemhando yebhitumini tangi inogona kugadzirwa pakupisa kuitisa mafuta kupisa, kudziyisa kwemagetsi kana kutonhora zvakananga nevanopisa. Kana matangi mazhinji achishandiswa panguva imwe chete, pombi iri pamberi petangi inogona kugadzirwa uye kuisirwa kuti iite iyo tangi izere iri nyore kwazvo painenge ichisanganiswa panzvimbo.
Iyo bhitumini decanter inogadzirwa nekambani yedu iri nyore kushanda nekuisa. Iyo tangi yakakamurwa kuita maviri makamuri, iyo yekumusoro inoshongedzwa nekudziya coil, iyo hydraulic system inosundira bhitumini yebhakiti rimwe nerimwe, uye bhitimu inonyungudutswa nekupisa. Oiri yekuzora mafuta inotsvairwa kuti ienderere mberi nekunyungudika pombi, uye ipapo ino pumiswiwa kunze kwekushandisa. Iyo bhitumini decanter inogona kuiswa mumudziyo wekufambisa. Kambani yedu inogadzira zvakare bhagi (bhegi) rinonyungudusa sisitimu, cantilever crane hoisting, nyore kushanda, kunyatsoshanda.
Iyo inopisa silo yekuchengetera inogadzirwa nekambani yedu yakakamurwa kuva mhando yekudzivirirwa mhando uye yakajairika mhando. Inogona kuenzaniswa ne80t / h-480t / h asphalt inosanganisa zvidyarwa, uye huwandu hwacho hunogone kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi. Ihuremu hwemakumi matatu ematani uye pazasi anogona kupinda mune yekufambisa yemidziyo. Kambani yedu yakaenderera nekuvandudza maitiro ekugadzira e inopisa silo yekuchengetera kwemakore mazhinji, nemabasa akavimbika. Yakasarudzika ushamwari inopisa silo silo inosangana zvikuru nezvinodiwa pakuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Chirimwa cheBitumen emulsion chakagadzirwa nekambani yedu chine mafuta mazhinji, tangi rimwe remvura inopisa, maviri emulsified tanking tank, imwe bhitumini tanki, imwe emulsified bitumen tank (yekushandurwa kweshanduko), imwe inogona kuchinjika pombi pombi, imwe inochinja inomhanya emulsion pombi. , chigayo chimwe, imwe emulsified pombi yekuzvitakura pombi uye imwe yemagetsi control room. Zvimwewo zvine chekuita neyakaipisa mafuta pombi yekupisa, pombi yekuparadzira pombi, emulsion yekuparadzira pombi. Bitumen emulsion chirimwa chakakamurwa kuva mhando mbiri: izere-otomatiki uye hafu-otomatiki. Iwo otomatiki otomatiki akakutsidzira iyo emulsifier, uye kuburikidza neiyo subtractive metering nzira, otomatiki achienzanisa emulsion uye pombi mumugayo. Maitiro acho ari nyore, ari nyore kushanda, ari nyore kudzidza uye kunzwisisa.
Iyo SBS Polymer yakashandurwa zvishoma pombi yakagadzirwa nekambani yedu inotora skid yakakwira nharembozha dhizaini, iyo iri nyore kwazvo kumisikidza uye disassembly. Iyo tangi yekuvhenganisa inoshongedzwa neyekumhanya-yakadzika-yega yekuparadzira agitator kudzivirira kusakwanira fusion yemasumbu uye bhitume. Pasina kuzvimba nguva isati yasvika, inogona kugadzirwa nekukuya uchidya. Iyo SBS Polymer yakagadziriswa pombi yakagadzirirwa kukamurwa mumhando mbiri: yakazara-otomatiki uye semi-otomatiki. Iyo yega yega PMB chirimwa chinoremerwa neyemuyenzaniso module uye inonyatso kufananidzwa nemasaga uye nebhitumini. Iyo komputa yekudzora system inogona kutarisa mamiriro ekugadzira munguva chaiyo.
Iyo organic kupisa inotakura tembiricha kupisa mafuta conduction chando inogadzirwa nekambani yedu yakakamurwa kuva yakajairika mhando uye inopisa yemhando mhando. Iyo inopisa inogona kunge iri mafuta akareruka, gasi echisikigo kana mafuta gasi. Iyo boiler yemhepo inopisa yemhando inoshandisa iyo yakasara kupisa yeflue gasi kupisa mweya yekubatanidza, iyo inogona kuderedza tembiricha yegetsi rakawandisa, saka kurasikirwa kwekupisa kwegesi wakawandisa kunogona kushandiswa kunenge 7%, saka kushanda kwe boiler kuri kuita makumi mapfumbamwe nemasere. %.
Wuxi Jianeng yakavambwa muna 1999. Iyo ine zviuru zvina makumi maviri emamirimita emamiti, 38.28 miriyoni yuan emari yakanyoreswa, vanopfuura makumi maviri vevashandi uye zana revashandi.
Wuxi Jianeng anosarudzika mukugadzirwa kwemidziyo inotsigira yeasphalt kusanganisa chirimwa. Wakareba kwenguva yakareba mushandirapamwe anosanganisira LintEC, AMMANN, NFLG, XCMG, MARINI, D&G, NIKKO naTanaka.
Wuxi Jianeng anga achiita injinjini yekugadzira michina kugadzira uye kugadzira kweanopfuura makore makumi maviri. Nekutsvaga kwekuita kwechigadzirwa, yakawana huwandu hwekutungamira patents neUtility modent patents, iyo yakagamuchira kurumbidzwa kusabvumirana muindasitiri iyi.
Vertical bitumen tangi yeXCMG
Akakwenenzverwa bitumen tangi for NFLG
Hot inopisa silo ye AMMANN
Vertical bitumen tangi ye AMMANN
Hot inopisa silo yeLintec
Yakareba tumen tangi ye AMMANN
Vertical Bitumen tangi yeD&G
Vertical bitumen tangi yeD&G 2
Small Gold yanyunguduka Furnace , Drumn Melting Unit", Mobile Asphalt Batching Station Lby1000 (80t / H) , Bhitumini yanyunguduka Equipment , Bolt Kuchengetedza Mabheji, Asphalt yanyunguduka Equipment ، Zvigadzirwa Zvese.